Gigi Hadid akachera mutsara pachirongwa cheVersace
Nyeredzi Star News
Kuvhiringidza pamafashoni zvinoratidzika kuitika kazhinji, asi nguva ino hazvina kuitika kwete nemuenzaniso wakajairika, asi ne podium queen, kunze kweiwo hapana chakasvibiswa chine chinangwa, Gigi Hadid.
Ratidza Donatella Versace
Mutungamiri mukuru Versace akaendesa vateki vemasikirwo nemusana wekutenga kwechando-yechando muna 2016/17 mune musangano weMafashoni weMafambo muMilan. Panguva imwe chete, zvidzoro uye zvemitambo (panguva ino Donatella akagadzira zvipfeko mumutambo-chic) ​​akaratidza mienzaniso yakakurumbira. Shaik, Poli, Smalls, Jenner, Hadid, Closs, Lima, Dann vakauya pachikwata.
Donatella akamupa kusiyanisa pamusoro wehurukuro yakakurumbira yemazuva ano. Haana kupa vashandi vanonakidza vatengi kuti vafukidze sneakers, asi vanokurudzira kushandura chikuva chechitsinho.
Iko kuunganidzwa kunotungamirirwa nezvinhu zveusiya, rima bhuruu, bhuruu, pinki uye ruvara. Kushongedza kwaro, maererano nenyanzvi, kwakava majasi emakumbo nemigumisiro yemafirimu, magasi emadekwani akashongedzwa nemaruva, mazhenje mumasquin, mabheji echibvumirano.
Hadid akaenda kune vateereri kuti vaudze chigadziko chakanaka chakanaka pasi. Apo kunaka kwemakore makumi maviri nemaviri kwakayambuka hafu yengara, harani yezvokupfeka zvakanyengera zvakanyura pasi ndokufumura chifuva chake. Vateereri vanofara vakatarisa muto weGigi, uye vateereri vemifananidzo vakakurumidza kuita mapikicha.
Iyo blonde zvakare yakatsigirazve basa rake. Gigi akaenderera mberi achifamba pamusana wekambani sekuti hapana chakaitika. Haana kunyadziswa kana kuvhiringidzika kwakaratidzwa mumufananidzo wake wakanaka.
Bella Hadid mubvunzurudzo yemagazini yaHarper's Bazaar vakataura nezvekuzorora, paparazzi uye chiso chake chakakomba
Gigi Hadid akachinja zvisingazivikanwi pachivharo cheItaly Vogue
Gigi Hadid naZane Malik vakabvuma!
Nenzira iyo, Hadid haazeze muviri wake uye anotora chikamu mumapepa ekutsvaira kwemafirimu uye kushambadzira.
Imba yaGianluca Vakki vakasungwa pamatare
Amai nevanasikana: Dakota Johnson naMelanie Griffith vanogara mune rimwe nzvimbo yechitima
Julianne Moore akatsigira mwanasikana wake pamutambo wekutanga
Kubvutwa kweDolce & Gabbana kuri kuramba kuchiwedzera: Miley Cyrus akarwisa pachena mutemo wechigadzirwa!
Daniel Radcliffe nemusikana wake
Mattel akasunungura dhora raBarbie nechitarisiko chaGigi Hadid
Kate Middleton uye Prince William vakashanyira musangano webhizimisi kuManchester
Hailey Steinfield akatya vaenzi veCinemaCon mutambo wefirimu
Mhedziso iyo Demi Moore inotsvoda mwana muduku, yakamutsa vanhu
Mushure mekunyengera kwakaipisisa kweParis Jackson, mhuri inotya hupenyu hwake
Nhau dzeMadokero dzinotaura nezvekudzivirira Cameron Diaz
Lady Gaga uye Taylor Kinney vakasarudza kuedza chimwe chinhu mubhedha
Kylie Minogue akapiwa mubayiro wakakosha neSosaiti-Australia Society
Biography of Ornella Muti
Sei vachirota kuti vakaba mari?
Yakabikwa kabichi nokuda kwechando
Nzira yekuita zvidimbu iwe pachako?
Akachengetedza girazi pagirazi
Bracelet made of rubber bands "Quadrofish"
Salmonellosis - zviratidzo kune vanhu vakuru uye nzira dzakanakisisa dzokurapa
Nguruve nemiriwo - recipe
How to cook jelly?
Fleas iri muimba: sei kubvisa?
Skirt pasi pemabvi
Kabichi Zvokudya - Zvinyanya Kubudirira Zvokuda Kurasikirwa Kweutoro
Maruva kubva kuKapron
Osteoma yepamberi pfupa
Mwana akazvarwa asina maoko, asi atova adya!
Kushanda hupenyu hunzvimbo
Pamusoro pechiedza pane padenga
Iye kubva kunhering
Murume anosarudza sei mudzimai wake?
Zvikamu zveglasi zvekugeza